Umkhiqizi nefektri ehamba phambili ye-Magnesium L
ICofttek ingumkhiqizi omuhle kakhulu we-Magnesium L-threonate powder eChina. Ifektri yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kokukhiqiza (i-ISO9001 & ISO14001), enomthamo wokukhiqiza wanyanga zonke we-3300kg.
I-Magnesium L-threonate powder (778571-57-6) ividiyo
I-magnesium L-powderate powder Siziqu
Igama: I-Magnesium L-threonate
Ifomula Yamamolekhula: C8H14MgO10
Isisindo Yamamolekhula: I-294.495 g / mol
Igama lamakhemikhali: I-Magnesium (2R, i-3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
omqondofana: I-Magnesium L-Threonate
Isicelo: I-Magnesium L-Threonate yiyona ndlela efinyeleleka kakhulu yamaphilisi we-Magnesium. Kusetshenziselwa ukuthuthukisa inkumbulo, ukusiza ngokulala, kanye nokuthuthukisa umsebenzi wokuqonda jikelele.
ukubukeka: powder emhlophe
I-Magnesium L-threonate powder (778571-57-6) i-NMR Spectrum
I-Magnesium, njengoba sazi ukuthi ingumbiwa wamaminerali, obaluleke kakhulu empilweni - ikakhulukazi ebuchosheni nakuwo wonke amasistimu ethu wezinzwa. IMagnesium - i-divalent cation (i-ion ekhokhiswe kahle), ibaluleke kakhulu ekwakhiweni okufanele kwamasekethe we-neuronal njengoba ibophezela kuma-neurotransmitter receptors futhi iyinhlangano ye-enzymes ye-neuronal. Kukhonjwe ngokuyisisekelo ukusiza ukunciphisa ukukhathazeka, ukudana kanye nezinkinga zezinzwa. Emkhakheni wezokwelapha osebenzayo, iningi lochwepheshe bezempilo lizwa isidingo sokwengeza i-magnesium yeziguli zazo emikhubeni yazo. Isabelo Esinconyiwe Sesikhathi Sokudla se-magnesium siphakathi kuka-300 no-420 milligrams / ngosuku kubantu abaningi, imvamisa etholakala ngokudla. Kodwa-ke, isidingo esilinganisiwe esilinganisiwe (i-EAR) se-magnesium asitholakali ngokudla. Isibalo esesabekayo sikhona lapho. Lokhu kugcina kuholele ekusweleni kwe-magnesium okungadala izingqinamba ezithile ezibucayi njengokulimala kwengqondo okukhwantabalisayo, ukuphazamiseka kwemithambo yegazi, izifo zikaParkinson kanye ne-Alzheimer, ikhanda, ingcindezi, ukulimala ebuchosheni, ukubanjwa, kanye nezimo ezihlobene nethambo. Yilapho izinhlobo ezahlukahlukene ze-magnesium eyengeziwe zingena khona esithombeni. Kodwa-ke, kunenkinga ezungeze ukusetshenziswa kwe-magnesium etholakala njengezithasiselo zezinkinga zengqondo nezengqondo - akubonakali zingena kalula ebuchosheni. Ifomu lokuguqula i-magnesium - iMagnesium l-threonate, libonakala lisiza lapha.
Isambulo - iMagnesium L-Threonate powder
Izengezo ezivame ukutholakala ze-magnesium zenzelwe ukumuncwa okungcono futhi neMagnesium I-threonate. Lokhu kutholakala ngokubopha okungcono kwama-molecule we-magnesium asiza ukwenza ngcono ukuzinza, isilinganiso sokumuncwa nokusebenza ngempumelelo. I-Magnesium I-threonate iyindlela yakamuva kakhulu ye-magnesium. Ithimba lososayensi bezinzwa abavela eMassachusetts Institute of Technology naseTsinghua University eBeijing lenze iMagnesium I-threonate ngokuhlanganiswa kwe-magnesium ne-I-threonate, i-metabolite kaVitamin C. Lesi simanga ukwengeza ihamba kalula ngesihlungi esivikelayo sobuchopho ukuze ifinyelele lapho idinga khona. IMagnesium I-threonate engeyona eyemvelo incane njengoba izinzuzo zayo zikhulu.
Imvelo itholakala kosawoti be-Epsom, iMagnesium sulphate ayitholwa kalula ngumzimba ngakho-ke inemiphumela engemihle futhi. Ukuxuba i-threonic acid ne-magnesium, iMagnesium I-threonate yakhiwa njengosawoti ongangena kalula ebuchosheni usuke egazini. Phambilini lokhu bekungatholakala ngokulethwa ngemithambo. Ngokuya ngocwaningo lwezilwane lokhu futhi kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokufaka i-magnesium kumaseli obuchopho.
Lezi zithasiselo zeMagnesium I-threonate zikhombise ukuthi zingumthombo ophumelela kakhulu wokuxhasa ukusebenza kwengqondo nokudala umndeni wama-nootropics ngokuhlangana nemithi kadokotela.
Ukusebenza kwe-Magnesium I-threonate
Ukudla kwanamuhla akunayo i-magnesium futhi ngaphezu kwalokho, imishanguzo evame ukutholakala iyaqhubeka nokunciphisa izinga le-magnesium. Emazweni amaningi kubandakanya ne-United States, abantu abangaphansi kwama-50% abantu bahlangabezana nokunconywa noma isibonelelo sansuku zonke (i-RDA) se-magnesium. Yize ubuchopho budinga inani eliphakeme le-magnesium, ukugxila okuphezulu kukhona egazini.
IMagnesium ibaluleke kakhulu emisebenzini eminingi yezinzwa nezimo ezibandakanya:
Ukulimala okukhulu kobuchopho noma ukulimala
Okuxakayo ukuthi ayikho inani elanele le-magnesium eligcina esifundeni sobuchopho, likhawulele ukusebenza kwalo. Yilapho i-Magnesium l-threonate supplementation iba nesidingo sokuqedela ukungasebenzi kwe-magnesium, ikakhulukazi lapho abantu abangasebenzisi i-magnesium eyanele ngemithombo yokudla bekhombisa isimo esinciphile se-neurocognitive kanye nezimpawu ezihlobene.
Ukusebenza kweMagnesium l-threonate
Ingena ifinyelele endaweni efanele yobuchopho, lapho kudingeka khona ukunikezwa kwe-magnesium.
Kuthuthukisa ikhono lobuchopho lokuthuthuka nokukhula okusiza ukwazi nokufunda ukwenzeka.
Kuyasiza ekuqhakambiseni ukukhula kwamaseli amasha obuchopho.
Izinzuzo zeMagnesium I-threonate powder
IMagnesium inezinzuzo eziningi zezempilo. Kuthathwe ngesilinganiso esifanele, kuyaziwa ukukhulisa imizwa, kukhulise ukuqina kokubhekana nokucindezeleka, kuthuthukise ikhono lokugxila nokugxila, kukhulise amandla futhi kuthuthukise ikhwalithi yokulala. Iphinde iqede inkungu yobuchopho yasekuseni (isimo sokudideka, inkumbulo engeyinhle, kanye nokuntuleka kokugxila nokugxila nokucaca kwengqondo) - uphawu olujwayelekile oluneVestibular Migraine
Ikhono lobuchopho lokushintsha yi-neuroplasticity (eyaziwa nangokuthi i-neural plasticity, noma i-plasticity yobuchopho). Lokhu kuguquguquka kwemvelo kuqinisekisa ukuthi ubuchopho buyakwazi ukwakha ukuxhumana okusha kwe-neural (ukuhlangana kwe-neuronal) futhi kuthinte ukufunda, inkumbulo, isimilo, nemisebenzi ejwayelekile yokuqonda. Ubuchopho beplastiki budlala indima ebalulekile ekugugeni kobuchopho, ngokulahleka kwepulasitiki okuholela ekulahlekelweni komsebenzi wokuqonda. Ucwaningo lwe-neuroplasticity noma i-plasticity yobuchopho luyanda futhi ochwepheshe bezempilo nososayensi bathola ukuthi ukukhuphuka kwamazinga we-neuronal cell magnesium kungakhuphula ukuqina kwe-synapse kanye neplastiki, kuthuthukise ukusebenza kwengqondo konke. Iphinde ikhombise imiphumela ethembisayo yokusiza "ekuvuseleleni kabusha" ubuchopho ezenzakalweni zokulimala okulimazayo kwengqondo nezinkinga zempilo yengqondo. Noma yisiphi isengezo se-magnesium kungenzeka singasizakali ukubhekana nale nkinga — iMagnesium l-threonate kubikwe ukuthi yeqa isithiyo segazi-lobuchopho ukuze ikhuphule ngempumelelo amazinga e-magnesium ebuchosheni.
Ngaphezu kwalokho, futhi inezinye izinzuzo zezempilo kubandakanya ukumelana nesifuba somoya, amajaqamba emisipha, ukuqinisa amasosha omzimba, i-BP ephezulu, i-osteoporosis nezimo zenhliziyo.
IMagnesium l-threonate inomphumela wokuphumula, ithambisa izinzwa futhi isize ekuvikeleni nasekunciphiseni ukuqubuka nezinye izingqinamba ezihambisana nezinzwa.
IMagnesim l-threonate iqinisa amathambo ngokukhulisa ukuminyana kwamathambo, inciphisa ukuvuvukala, ithuthukise ikhwalithi yokulala futhi isuse umgudu wokugaya ukudla.
IMagnesium I-threonate ingumkhiqizo omusha ngokuqhathaniswa ngakho-ke ayinabo ubufakazi besikhathi eside bokusetshenziswa kwayo. Lokhu kukhulisa ukubaluleka kocwaningo oluyiqiniso nangaphezulu. Isivivinyo somtholampilo esenziwe sinezinto ezithembekile.
Isivivinyo somtholampilo seMagnesium I-threonate
Iphephabhuku lezokwelapha elishicilelwe linikeze imininingwane ethokozisayo nezinzuzo zezempilo zeMagnesium I-threonate. Iqembu lokutadisha eliqukethe abantu asebekhulile abanezimo zokuhlushwa, inkumbulo, ukuphazamiseka kokulala nokukhathazeka kumakwe ezinhlotsheni ezi-4 ezahlukahlukene - inkumbulo esebenza, inkumbulo eguquguqukayo, ukugxila nemisebenzi ephezulu. Lokhu kuqukethe amakhono amaningi asiza ekwakheni izinhloso, ukuhlela nokwenza. Izihloko beziphathwa ngeMagnesium I-threonate izinyanga ezi-3 zilandelana futhi njengoba bekulindelwe kwahlonzwa ukuthi izinga le-magnesium lenyuke kakhulu. Lokhu kuholele ekusebenzeni kwesihloko kuzo zonke izindawo ezine zezivivinyo. Futhi kwaholela ekwehlisweni kweminyaka yobuchopho begazi. Ngamanye amagama, lezi zihloko zakhula cishe iminyaka eyi-10 yobudala babo bobuchopho. Kodwa-ke, iMagnesium I-threonate yayingasizi kangako ekuthuthukiseni ukulala, ukukhuphula imizwa noma ukunciphisa ukukhathazeka ngaleyo ndaba.
Funda ngezilwane zeMagnesium I-threonate powder
Izifundo ezenziwa ezilwaneni zeMagnesium I-threonate zinokutholakele okuthokozisayo.
Ukukhathazeka kokukhathazeka kuqhathaniswa neMagnesium I-threonate
I-Magnesium I-threonate iyindlela ephezulu ye-magnesium esebenza njenge-relaxant yemvelo futhi isebenza ngokunciphisa ama-hormone okucindezeleka, okwandisa ukuthoba kwe-neurotransmitter GABA esikhundleni salokho. Iphinde isize ekuvimbeleni amakhemikhali okucindezeleka angene ebuchosheni. Ukuhlolwa kwe-Magnesium I-threonate ezilwaneni kufakazele ukuthi kungaba yi-bane yokusiza ngezinkinga zokukhathazeka, ama-phobias ajwayelekile kanye nokuphazamiseka okuthunyelwe ngemuva.
IMagnesium I-threonate iqhathaniswa ne-Alzheimer's and Dementia
IMagnesium I-threonate yaziwa nangokuthi yelapha ukuwohloka komqondo nesifo i-Alzheimer's. Amagundane namagundane asetshenzisiwe ekucwaningeni i-Alzheimer njengoba inkumbulo yabo nokukhula kobuchopho kufana nokwabantu. Kutholakale iMagnesium I-threonate ukusiza ukuqeda ukulahleka kwememori kanye nokwehla kwengqondo kumagundane.
Kukhona ubudlelwane obaziwayo phakathi kwezinga elincishisiwe le-magnesium nokulahleka kwememori. Ukukhuphuka kwamazinga we-magnesium ekudleni kubangela kakhulu ukuwohloka komqondo. Ucwaningo lunamathemba ezinzuzweni eziningi zokuzivikela ezivivinywa kumagundane ezibonisa amathuba okwelapha i-Alzheimer's kubantu.
IMagnesium I-threonate kuqhathaniswa nokufunda futhi ngekhanda
Amagundane lapho elawulwa nge-Magnesium I-threonate abenze baba nobuchule. Bakhombise ukuzimisela ukufunda nokwenza ngcono ukusebenza, ngaphezu kwezinkumbulo zesikhashana nezesikhathi eside.
Ubufakazi nokusekelwa kweMagnesium Threonate
Ucwaningo lokuqala lweMagnesium threonate lukhombisile; ukulungiswa kwama-chromosomes alimele, ukwanda kwezinga le-magnesium ebuchosheni uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ze-magnesium, ukusebenza kangcono endaweni yememori futhi ngaphezu kwakho konke ukuguqulwa kwezinkumbulo zesikhashana. Ekudleni i-magnesium nganoma yiluphi uhlobo emzimbeni, kulindeleke ukuthi yenze imisebenzi eminingi efaka imisebenzi yemisipha, ukwakheka kwamaprotheni nama-acid okunamafutha, ukusebenzisa amavithamini B, ukujiya kwegazi, ukufihla i-insulin nokwakhiwa kwe-ATP. Ngaphezu kwalokho, i-magnesium isebenza njengesikhuthazi sama-enzyme ahlukahlukene emzimbeni wonke. Kuyasiza futhi ekwakheni amasosha omzimba.
Ukukhethwa kwama-Magnesium I-threonate supplements
Qiniseka ukuthi uhlola amalebula ngokucophelela ukuze uqiniseke ukuthi isengezo siqukethe I-Magnesium I-threonate.
Isilinganiso esinconyiwe seMagnesium I-threonate powder
Ukudla okunconyiwe okujwayelekile kwe-magnesium emadodeni kungama-420 milligrams kanti kwabesifazane kungama-milligram angama-320. Noma kunjalo, lokhu kungahluka ngokuya ngeminyaka. Akukho ukutholwa okunconyiwe okukhethekile kweMagnesium I-threonate. Yize ama-milligram ayi-1500 kuye kwangama-2000 ngosuku kufanele abe yindlela enhle yezinzuzo ezisebenzayo zokuqonda. Isibonelo esivamile sokuthengiswa kakhulu yiMagtein enelungelo lobunikazi le-Magnesium I-threonate eye yazama nasezilwaneni. Iqukethe ukwakheka okuqinile kusetshenziswa izithako ezisebenzayo.
Umthamo onconyiwe weMagnesium I-threonate yile:
Izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi nantathu - 80-240 milligram / ngosuku
Abesifazane abangaphezu kweminyaka eyishumi nane - 300 -360 milligram / ngosuku
Abesilisa abangaphezu kweminyaka eyishumi nane - 400-420 milligram / ngosuku
Abesifazane abakhulelwe / abahlengikazi: 310- 400 milligram / ngosuku
Ngenkathi lokhu kungabukeka njengomthamo omkhulu, khumbula ukuthi ingxenyana kuphela etholwa. Ngakho-ke, i-2,000 milligram yeMagnesium l-threonate izoletha kuphela ama-milligram ayi-144 we-elemental magnesium, okucishe kube yingxenye yesithathu ye-Recommended Dietary Allowance ye-magnesium.
Izizathu zokucabangela imithombo eminingi ye-magnesium
Akukho okukuvimba ekucabangeni izinhlobo eziningi ze-magnesium njenge-magnesium glycinate, i-citrate noma i-gluconate. Kunezinhlobo eziningi zokwakheka ezitholakala ngaphezu kwekhawunta yokudla kwe-magnesium. Uphawu lokukhomba ukudla okwanele kwe-magnesium yizitulo ezixekethile futhi lisebenza njengophawu olubomvu.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza kweMagnesium l-threonate?
I-Magnesium l-threonate efakwe ngomlomo ibikwe ukuthi ithathe okungenani inyanga eyodwa ukukhuphula amazinga e-magnesium ebuchosheni kumazinga adingekayo lapho ingakwazi ukubhekana nokuphazamiseka okuthile kobuchopho, njengokucindezeleka, ukukhathazeka kanye nokulahleka kwememori okuhlobene nobudala futhi kube nomthelela omkhulu kwimemori ukwakheka nokusebenza kobuchopho.
Imiphumela emibi ye-Magnesium I-threonate
Kunemiphumela emibi kakhulu embalwa kakhulu eyaziwayo yeMagnesium I-threonate efaka ukozela, ikhanda, ukungahambi kahle kwamathumbu nokuzwa isicanucanu. Umphumela ovame kakhulu wecala owaziwa nge-magnesium supplement yinkqubo yokugaya ukudla ecasulayo. Kodwa-ke, ngeMagnesium I-threonate, akufanele yenzeke njengoba yakhelwe ukufakwa ngqo ebuchosheni. Uma usebenzisa noma imuphi omunye umuthi, kungakuhle ukuthi ubonane nodokotela wakho noma nodokotela wakho ukuze uthole iseluleko esingcono. I-Magnesium ayinconyelwe abantu abanezifo zezinso ngoba lokhu kuvame ukukhipha i-magnesium emzimbeni wakho.
Umbuzo wangempela uwukuthi - kufanele iMagnesium I-threonate ithathwe nenye i-magnesium Izithako? Uma uthatha i-magnesium ngezinkinga zokugaya ukudla, zama ukuthatha iMagnesium I-threonate. Uma uqala ukuzizwa uphethwe yisitulo noma izitulo ezikhululekile, kungaba ukuhlakanipha ukubuyela ku-magnesium ngokwakho. IMagnesium l-threonate ene-caffeine ingakhuphula izinga lokuqonda nokusebenza komzimba kepha uma ithembela kuyo, ingaholela ekutheni umzimba uhoxe ekukhathaleni, ukusebenza kahle kwengqondo, nokucasuka uma kungathathwa ngokuqhubekayo. Lesi yisizathu sezinguquko ezinzima kwemizwa kwabanye abantu nokungabi nentshisekelo nentshiseko yokwenza imisebenzi yomzimba. Omunye umbuzo obuzwa njalo ukuthi kungathatha isikhathi esingakanani uze ubone ushintsho lwangempela? Ochwepheshe bezempilo batusa ukulinda okungenani amasonto amane kuya kwayisishiyagalombili ngaphambi kokulahla izibhamu zakho!
Ngubani ongafanele athathe iMagnesium l-threonate?
Abantu abanezinkinga zenhliziyo
Abantu abane-BP ephezulu engalawulwa (≥ 140/90 mmHg)
Abantu abanenkinga yokugula ngengqondo abadinga ukulaliswa esibhedlela ngonyaka odlule
Abantu abanokukhubazeka kwezinso / kwezifo
Abantu abaphethwe yisifo sikashukela sohlobo lwe-I
Abantu abanesifo se-thyroid esingazinzile
Abantu abanesifo sokuzivikela komzimba njengeHuman Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome
Abantu basebenzise kabi izidakamizwa noma utshwala ezinyangeni eziyishumi nambili ezedlule
Abantu abaphethwe ama-carotid bruits, ama-lacunes aqinisekisiwe, ukuhlaselwa kwe-ischemic okudlulayo kanye nesifo esibalulekile samaphaphu
Abantu abanesimo esibi
Abantu abanezimo lapho isengezo singadala ukuphikiswa kwe-positron emission tomography (PET) scan, kufaka phakathi isifo sohlangothi noma isifo senhliziyo ezinyangeni eziyisithupha ezedlule noma ukungakwazi ukulala phansi ihora elilodwa
Abantu abasebenzisa imishanguzo engavunyelwe ukuthathwa kanye nezithasiselo ze-magnesium ezinjengezinciphisi zegazi kanye nemithi elwa namagciwane.
Abantu abanokungezwani komzimba noma ukuzwela kunoma yisiphi isithako esisetshenziswe kuleso sengezo
Abesifazane abakhulelwe, abancelisayo, noma abahlela ukukhulelwa kufanele babonane nodokotela ngaphambi kokuthatha lesi sengezo
Ukukhetha isengezo esifanele: Ukubuyekezwa kwe-Magnesium l-threonate
Abantu abanenkinga yokulala nokuntuleka kokugxila basebenzisa lesi sengezo - I-Magnesium l-threonate egcwele iVitamin-C threonate ngoba iyenza ibe phezulu ekutholakaleni kokuqhathaniswa nenye ibanga elejwayelekile leMagnesium l-threonate. Isengezo sinamandla okuwela isithiyo segazi nobuchopho esihlinzeka ngemagnesium eyanele ebuchosheni futhi ithuthukise amakhono okuqonda. Ngokuhlanganisa i-magnesium ne-theanine namanye amaminerali abalulekile, umzimba unganikezwa ngemfuneko yokudla nsuku zonke ngaphandle kokunciphisa amanye amavithamini namaminerali.
IMagnesium l-threonate ithuthukisa inkumbulo kumuntu osekhulile ongaphezulu kweminyaka engama-50 futhi ophethwe ukuwohloka komqondo, ukugula kukaParkinson noma izimpawu ezibuthakathaka zemizwa.
Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwesengezo kuthuthukisa inkumbulo, kukhulisa amakhono okuqonda nawokufunda ngamaphesenti angaba yishumi nesishiyagalombili esikhathini esiyizinsuku ezingamashumi amathathu kuye kwangamashumi ayisithupha. Kwakha umphumela opholile futhi ophumuzayo emisipheni futhi unikeze i-booster ebonakalayo ebonakalayo nengokomzimba.
Abanye abantu bakuthola kulula ukuthatha lesi sithasiselo kwifomu lamaphilisi njengoba kukhona i-gelatin emboza amaphilisi aphakathi nendawo, okulula ukuwagwinya nokulula ukugaya. Amaphilisi agcotshwe ku-gelatin asusa ubuthi ohlelweni lokugaya ukudla
Okuqukethwe okwethusayo kusengezo kuqeda ukukhathala ngokomzimba nangokwengqondo, kukhuthaza ukulala ngokuphumuza umzimba. Izinsizakusebenza ezinhle zokulala ekuvimbeleni isifo semilenze esingenakuphumula (isimo esidala isifiso esingalawuleki sokuhambisa imilenze yakho) namaphupho amahle.
Lapho isithasiselo sithathwa isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingamashumi amathathu, sithuthukisa ukugxila futhi sinciphisa inkungu yengqondo nokukhulisa amakhono okuqonda aholele ekugxileni okukhudlwana nasekusebenzeni okwengeziwe ngesikhathi somsebenzi, ngenkathi kufundwa, kufundwa noma kwenziwa noma yimuphi umsebenzi womzimba.
Isengezo kufanele sithathwe ngokudla noma ngaphambi kokulala. I-RDA ingamaphilisi amathathu kuya kwamane ngosuku kanye nokudla, kepha ingasetshenziswa ngemuva kokudla futhi lapho amapheshana okugaya ukudla esebenza kakhulu ngalesi sikhathi, enikeza imiphumela esheshayo.
Isengezo sinemiphumela emibi emincane. Lesi esingesihle sifaka phakathi isisu esithukuthele kanti esimnene yikhanda noma ukozela. Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi iMagnesium l-threonate iphephe ngokuphelele ukuthi ingathathwa njengesengezo nsukuzonke ngaphandle kwemiphumela emibi emibi.
Ungayithenga kuphi iMagnesium l-threonate?
Ngenhlanhla, abakhiqizi abaningi, abathengisi kanye nemikhiqizo bathengisa isengezo esimangazayo - iMagnesium I-threonate. Itholakala kalula ku-inthanethi futhi futhi umuntu akudingeki alwe kanzima ukuyithenga. Kodwa-ke, into eyodwa okufanele uyikhumbule ukuthi eshibhe akuyona engcono kakhulu. Ngaso sonke isikhathi funa umkhiqizo ohamba phambili, umthengisi nomakhi othembekile nodumile, lowo inqubo yakhe yokukhiqiza nokugcina isitifiketi iqinisekisiwe
I-Magnesium l-threonate powder Australia
E-Australia, isengezo siyatholakala kuzo zombili izinhlobo ze-powder ne-capsule. Umkhiqizo uyatholakala njenge- - Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder
Inani - AUD 43.28
Amaqiniso wokungezelela ngomkhiqizo
Ukukhonza Usayizi 1 scoop (cishe. 3.11 gram)
Izinkonzo Ngesiqukathi Esingaba ngu-30
Inani Ngokwenza Ukukhonza
Ukunikezwa okukodwa kwesengezo (i-Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) kunikela ngama-milligram ama-2,000 144 we-magnesium l-threonate, okuhumusha kumamiligremu ayi-XNUMX we-elemental absorbable elemental Mg. Ubuchopho bumunca kalula isengezo sempilo yobuchopho ethuthukisiwe kanye nokuqonda kwentsha. Izinsizakusebenza ekulondolozeni ukuxhumana kwe-synaptic phakathi kwamaseli obuchopho futhi kukhulisa izindlela zokusayina zeseli lobuchopho ezinempilo. Kuyinhlanganisela yesiphuzo esiphundu esiphundu esiphundu esiphundu.
I-citric acid, i-gum acacia, i-maltodextrin, ukunambitheka kwemvelo, ukukhishwa kwe-stevia, i-silica.
I-Magnesium l-threonate powder Canada
ECanada, isengezo siyatholakala njenge - Naka Platinum Magnesium l-threonate
Inani - CAD 46.99
Amaqiniso angeziwe ngomkhiqizo
INaka Pro's Pro MG12 Magnesium l - threonate etholakala njengesengezo eCanada ikhonjiswe njengeyona kuphela ifomu le-magnesium elingakhuphula amazinga we-magnesium ebuchosheni. Okuqukethe ama-milligram ayi-144 eMg no-2000 milligrams we-magnesium l-threonate PRO MG12 kungavikela ubuchopho ekulimaleni kwenkumbulo futhi kuthuthukise izimpawu zesifo sokuqala se-Alzheimer's.
Inani ngokusebenza ngakunye
Izithako - Isilinganiso ngasinye samaphilisi amathathu siqukethe iMagnesium l-threonate 3 milligram (2000 milligram ye-elemental Mg)
Izithako ezingezona ezokwelapha
I-Microcrystalline cellulose, i-magnesium stearate (umthombo wemifino), i-hypromellose (i-capsule ingredient)., Iqukethe i-NO eyengeziwe ye-gluten, amantongomane, amaqanda, imikhiqizo yobisi, inhlanzi noma i-shellfish, imikhiqizo yezilwane, ummbila, imibala yokufakelwa noma ama-flavour, ukolweni noma imvubelo.,
I-Magnesium l-threonate powder i-United Kingdom
E-United Kingdom, isengezo siyatholakala kuzo zombili izinhlobo ze-powder ne-capsule. Kungumkhiqizo ofanayo otholakala e-Australia.
Gcina kuvaliwe ngokuqinile endaweni epholile, eyomile
I-Magnesium I-threonate - isinyathelo esilandelayo
I-Magnesium ibalulekile empilweni enhle yomzimba kanye nenhlalakahle yengqondo. Ukubaluleka kwangempela kokwelashwa kwempilo yengqondo ye-magnesium kudluliswa ukungakwazi kwayo ukungena ngongqimba oluvikelayo lobuchopho. IMagnesium I-threonate iyakwazi ukubhekana nalokhu ngokungena ngqo ezifundeni zobuchopho ezifunwayo. Njengoba abantu abaningi behlushwa ukuphazamiseka kwengqondo ngenxa yokuntuleka kwe-magnesium emzimbeni wabo, kufanelekile ukuthi udubule iMagnesium I-threonate powder ekuthuthukiseni ikhono lobuchopho lokubhekana nale nkinga.
Imininingwane enikeziwe isuselwa kuzinto zokucwaninga kanye nokutholakele. Lokhu akuvunyelwe yi-FDA futhi akuhloselwe ukukhomba, ukwelapha noma ukuvimbela noma yiziphi izifo noma izinkinga zempilo.
Njengoba kunikezwe ukuthi i-Food & Drug Administration ayilawuli izithasiselo ngendlela efanayo njengoba ihlola futhi iqaphe izidakamizwa, umuntu udinga ukubheka imikhiqizo eqinisekiswe abantu besithathu, njenge-NSF International (inhlangano yokuhlola umkhiqizo waseMelika, ukuhlolwa kanye nesitifiketi), ILabdoor, noma i-Underwriters Laboratories, yezokuphepha nekhwalithi.
Okokugcina kodwa hhayi okuncane, cabanga ngokugwema izithasiselo eziqukethe noma iziphi izithako zokufakelwa, ezinjengemibala yokufakelwa, ukunambitheka kanye nezinto zokubulala.
I-Xu T, uLi D, i-Zhou X, i-Ouyang HD, i-Zhou LJ, i-Zhou H, i-Zhang HM, i-Wei XH, uLiu G, uLiu XG. Ukusetshenziswa ngomlomo kwe-Magnesium-L-Threonate Attenuates Vincristine-indied Allodynia and Hyperalgesia by Normalization of Tumor Necrosis Factor-α / Nuclear Factor-κB Signaling. I-Anesthesiology. I-2017 Jun; 126 (6): 1151-1168. doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601. I-PubMed PMID: 28306698.
U-Wang J, uLiu Y, uZhou LJ, u-Wu Y, uLi F, uShen KF, uPang RP, u-Wei XH, uLi YY, uLiu XG. I-Magnesium L-threonate ivimbela futhi ibuyise ukusilela kwenkumbulo okuhambisana nobuhlungu be-neuropathic ngokunqandeka kwe-TNF-α. Udokotela Obuhlungu. 2013 Sep-Oct; 16 (5): E563-75. I-PubMed PMID: 24077207.
Mickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Roger MM, Wiles NR. Ukudla okungapheli kwe-magnesium-L-threonate kushesha ukuqothula futhi kunciphise ukubuyiselwa okuzenzakalelayo kokuphambuka kokunambitheka okunesimo. Pharmacol Biochem Behav. 2013 Meyi; 106: 16-26. doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019. Epub 2013 Mar 6. I-PubMed PMID: 23474371; I-PubMed Central PMCID: PMC3668337.
I-Oleoylethanolamide (OEA) powder (111-58-0)
I-Citicoline Sodium (33818-15-4)